Seal Foil Aluminium miaraka amina fotokevitra fanamafisana ny induction
Home / Masinina famehezana induction / Seal Foil Aluminium Miaraka amin'ny Induction
Sokajy: Masinina famehezana induction Tags: Al foil fitomboka, tombo-kase fampidirana aluminium foil, tombo-kase aluminium foil, mpanamboatra tombo-kase aluminium, vidin'ny tombo-kase aluminium, tombo-kase aluminium foil, tombo-kase fampidirana tavoahangy, mividy tombo-kase aluminium foil, tombo-kase aluminium foil cap, tombo-kase foil fampidirana, vidin'ny tombo-kase fampidirana, tombo-kase fampidirana
Seal Aluminium Foil misy induction
Inona no atao hoe "aluminium foil sealer amin'ny induction"?
aluminium foil tombo-kase miaraka amin'ny fampidirana dia ampiasaina amin'ny tavoahangy PP, PE, PET, PS, ABS, HDPE, LDPE ary fitaratra, izay mampiasa fitsipika elektromagnetika hamokarana hafanana avo be hanalefaka foil aluminium izay mifikitra amin'ny fisokafan'ny tavoahangy, mahatratra ny tanjon'ny proof-wet , porofo manamarina ny fanitsakitsahana rano, fanamarinana ahitra ary fanitarana ny fotoana fitehirizana.
Ny karazana tombo-kase anatiny mahazatra dia tombo-kase anatiny 2 izay mamela tombo-kase faharoa ao anaty satroka rehefa nesorina ny tombo-kase fampidirana. Matetika izy io dia ampiasaina izay ahiana ny olana amin'ny famoahana. Safidy iray hafa ny tombo-kase anatiny tokana izay esorina rehefa tsy esorina ny tombo-kase fampidirana ary tsy misy liner tavela intsony ao amin'ny fanidiana. Azonao atao ihany koa ny misafidy amin'ireo tombo-kase izay misy pulltab na ireo izay manana tombo-kase voaravaka tsy mamela ambiny eo amin'ny tavoahangy. Tokony ho azonao antoka fa mifanaraka amin'ny tavoahangy tavoahangy ny liner.
modely 2500W 1800W 1300W
Diameter famehezana 60-180mm 50-120mm 15-60mm
Hafainganana famehezana Tavoahangy 20-300 / min
Haavony famehezana 20-280mm 20-180mm
fahan'ny TOSIKARATRA Dingana tokana, 220V, 50 / 60Hz
Fitaovana azo ampiharina PP, PE, PET, PS, ABS, HDPE, LDPE ary tavoahangy fitaratra, sarimihetsika tavoahangy plastika vava plastika
Lafiny (L * W * H): 1005 * 440 * 390mm 970 * 515 * 475mm
Ahoana ny fiasan'ny aluminium foil Sealer amin'ny induction